Child – Page 32 – Healthy Life Journal
အိပ်ရင်း လမ်းလျှောက်တာက အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ အိပ်ရင်း လမ်းလျှောက်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါထတာ (Heart Attack)၊ သတိလစ်မေ့မျောတာ စတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီး လူအများကြားမှာ ထင်မြင်နေကြပေမယ့် တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အိပ်ရင်း လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ တကယ့်အန္တရာယ်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “အိပ်ရင်း လမ်းလျှောက်တဲ့သူကို...
အနုပညာရှင်တို့၏ အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်
စည်သူလွင်နှင့် နွယ်မာကျော် – တစ်ဦးမှာရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျင့်ကောင်းလေးကို နောက်တစ်ယောက်ကလိုက်လုပ်ဖြစ်တာမျိုး ရှိပါသလား။ အစ်ကိုတို့က အနုပညာသမားဆိုတော့ အရင်တုန်းက အိပ်ချိန်ကပုံမှန်မရှိဘူး၊ အိပ်ချိန်နဲ့ အိပ်ရာထတဲ့အချိန်က ပုံမှန်မရှိတဲ့အပြင် အစားအသောက်ဆိုလည်း ပုံမှန်မစားဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က အတူနေတာဆိုတော့ အကျင့်က ကူးစက်တာတွေရှိပါတယ်။...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လေထိုးတာက မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ အလွန်အဖြစ်များပြီး မွေးပြီး အသက်သုံးလမှ လေးလအထိြဖစ်တတ်ပါတယ်။မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့ကလေးတွေကော နို့ဘူးတိုက်တဲ့ ကလေးတွေပါ လေထိုးတတ်ပေမယ့် နို့ဘူးတိုက်တဲ့ ကလေးတွေမှာ ပိုပြီး လေထိုးတတ်ပါတယ်။ မိခင် ဆေးလိပ်သောက်ရင် ကလေးမှာ လေထိုးနိုင်ခြေပိုများကြောင်း တချို့တွေ့ရှိချက်တွေအရ...
ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ အရေပြားဌာန၊ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ခရုသင်း၊ သမင်ဖြူရောဂါက ဘာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲဆရာမ။ ဖြေ. ခရုသင်း၊ သမင်ဖြူ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျသေသေချာချာမသိသေးပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားမှာ အဖြူ ကွက်သွားတာက...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆန်ဆိုက်ဒရိုမှာ မြင်းမွေးမြူရေးခြံတစ်ခြံပိုင်ဆိုင်တဲ့ မွန်တီရောဘတ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူကလူငယ်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေမြှင့်တင်ရေးပွဲစဉ်တွေမှာ သူ့မြင်းတွေကို သုံးခွင့်၊လေ့လာခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ”ကျွန်တော့်မြင်းတွေကို ဒီလိုဘာကြောင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားရတာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ခင်ဗျားကို ပြောပြချင်တယ်ဗျာ။ ဒီအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် မြင်းစောင်းတစ်ခုကနေတစ်ခု၊ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကနေတစ်ခု၊ လယ်တစ်ခုကနေတစ်ခု...
သမီးမိန်းကလေးများ အနာတရမရှိဘဲ ဖူးပွင့်လာစေရန်
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သမီးလေးလို့ သိလိုက်တာနဲ့ မိဘတွေ စိတ်ထဲမှာ ပူပန်စိတ်လေးတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြပါတယ်။ သမီးလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်မှု လုပ်တဲ့အခါ သားလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်တာထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ကြင်နာဖို့ လိုသလို သမီးလေး အနာတရမရှိဘဲ လောကအလယ် ဝင့်ကြွလာနိုင်ဖို့ အမြဲ...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးအစာက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို သိလိုကြသူ များစွာရှိမှာပါ။ အဲဒီအဖြေရရှိဖို့အတွက် ယေး-ဂရီဖန်ရောဂါကာကွယ်ရေးစင်တာတည်ထောင်သူ ဒေးဗစ်နဲ့အဖွဲ့ဟာ လေ့လာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းနည်းပါတဲ့ အစာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများပါတဲ့ အစာ၊ သက်သတ်လွတ်အစာနဲ့ ပရိုတင်း (အသား) များများပါတဲ့ အစာတွေကို...
ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဉာဏ်ဝင်းကျော် ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည် “သားရယ် . . ဟန်းဆက်တွေကလည်း သားမှာ ငါးလုံးတောင် ရှိနေပြီလေ၊ ဘာလို့ နောက်တစ်လုံး ထပ်ဝယ်မှာလဲ” “မေမေ မသိပါဘူးဗျာ သားကခေတ် လူငယ်လေ၊ ခေတ်နဲ့ အမီလိုက်နိုင်အောင်...